Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato CBD Ka Bixinta Opioid? • Daawooyinka Inc.eu
Jimco, Juun 24 | 2022
Bogga ugu weyn CBD Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato CBD si looga baxo opioid?
albaabka Ties Inc. 5 May 2022
maqaal by Ties Inc. 5 May 2022
Daraasadihii hore waxay soo jeedinayaan in cannabidiol (CBD), oo ah xarun ku jirta geedka xashiishadda, laga yaabo inay caawiso daaweynta ka-noqoshada opioid.
1 CBD ma fududayn kartaa ka bixitaanka Opioid?
2 Khatarta iyo Badbaadada
3 Hab kale
4 Dhibaatada Opioid
Daraasad la sameeyay 2021 ayaa sheegtay in CBD walaaca iyo lallabbo, laba calaamadood oo dhici kara inta lagu jiro joojinta opioid. Daraasadu waxay sidoo kale ogaatay in dadka xanuunka qaba ay qaateen dawooyin yar oo opioid ah haddii sidoo kale la siiyo CBD.
Maamulka caafimaadku uma oggolaanin CBD in loo isticmaalo ka bixitaanka opioid. CBD waxay kaloo keeni kartaa waxyeelooyin. Hoos waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan isticmaalka CBD ee ka-noqoshada opioid, oo ay ku jiraan wax badan oo ku saabsan ammaankeeda iyo sida ay u barbar dhigto daaweynta dhaqameed.
CBD ma fududayn kartaa ka bixitaanka Opioid?
Dadka si joogto ah u isticmaala opioids muddo dheer ka dibna si lama filaan ah u joojiya waxay la kulmi karaan calaamadaha ka-noqoshada. Calaamadaha ka-noqoshada waxay noqon karaan kuwo daciifa waxayna guud ahaan aad u daran yihiin 1-2 toddobaad ee ugu horreeya. Si kastaba ha ahaatee, waxay sii jiri karaan bilo taasoo keenaysa soo noqoshada, isticmaalka aan badbaadada lahayn iyo qaadashada xad dhaafka ah.
Daraasada 2021 waxaa ku jiray dib u eegis qoto dheer oo 44 daraasadood lagu baarayay isticmaalka CBD ee xaalado kale oo caafimaad oo kala duwan, sida walaaca, xanuunka iyo hurdo la'aanta. Hal daraasad ayaa lagu ogaaday in xaruntu ay hoos u dhigtay rabitaanka opioid ee dadka qaba xanuunka isticmaalka opioid (OUD) kuwaas oo horey u joojiyay isticmaalka opioids. Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale ogaadeen in CBD ay hoos u dhigtay calaamadaha qaarkood kuwaas oo sidoo kale dhici kara inta lagu jiro ka bixitaanka. Cannabinoid waxay saameyn togan ku yeelan kartaa kacsanaanta, niyad-jabka, hurdo la'aanta, xanuunka, murqaha oo gariir, lallabbo iyo matag iyo cadaadiska dhiigga.
Tani aragti ahaan waxay la macno tahay - in kasta oo aan si toos ah loo baarin - in dhakhaatiirtu ay tixgelin karaan inay CBD ku daraan qorshayaasha daaweynta si loo yareeyo calaamadaha ka-noqoshada. Si kastaba ha noqotee, barashada saameynta CBD si toos ah uga bixista opioid iyo go'aaminta qiyaasaha iyo qaababka ugu wanaagsan waxay u baahan tahay cilmi baaris dheeraad ah.
Khatarta iyo Badbaadada
Natiijooyinku waxay muujinayaan in CBD ay sababi karto waxyaabaha soo socda:
Dhaawaca beerka ee la xidhiidha qiyaasta: Khatarta dhaawacani waxay kordhisaa marka qofku ku qaato CBD daawooyinka kale qaarkood.
Suuxinta: Saamayntan ayaa laga yaabaa inay dabarto waqti ka dib, laakiin isticmaalka CBD ee lagu daro daroogooyinka leh saameyn suuxdin waxay si aad ah u yareyn kartaa neefsashada.
Kordhinta fikradda isdilka: Qof kasta oo qaadanaya CBD oo la kulma isbeddellada niyadda ama dabeecadda waa in uu qiimeeyaa dhakhtar.
Dhakhaatiirtu kuma talinayaan CBD kuwa xasaasiyad ku leh CBD ama saliidda sisinta, taariikhda cilladaha isticmaalka maandooriyaha, ama niyad-jabka ama fikradaha isdilka.
Intaa waxaa dheer, sida FDA ay ka digtay, cilmi-baaristu ma muujin in CBD ay badbaado tahay oo go'aaminta saameynteeda muddada dheer waxay u baahan tahay cilmi-baaris dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, FDA waxay muujineysaa in alaabada CBD ay ku jiri karaan wasakh, sunta cayayaanka, iyo kiimikooyinka noolaha.
Daawooyinka OLD waxay ahaanayaan heerka daawaynta dahabiga ah, maadaama ay yihiin xulashooyinka la xaqiijiyay si loo yareeyo xad-dhaafka iyo dhimashada. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay sii wadaan inay sahamiyaan doorashooyin kale.
Falanqaynta maadada 2018 ayaa qiimeysay waxtarka acupuncture ama electroacupuncture. Ka dib markii dib loo eego sagaal daraasadood oo ku lug leh wadarta guud ee kaqeybgalayaasha 1.063, qorayaashu waxay soo gabagabeeyeen in acupuncture iyo electroacupuncture ay yareyn karaan rabitaanka opioid. Weli, waxay ku dareen in daraasado dheeraad ah loo baahan yahay.
Opioids waxay ka tirsan yihiin koox dawooyin ah oo ay ku jiraan xanuun baabi'iyaha iyo walxaha sida heroin-ka. Waxaa jira xad-gudub badan oo loo geysto opioids taasoo horseedaysa qabatin iyo xad dhaaf. 2017, Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka waxay ku dhawaaqday dhibaatadan xaalad caafimaad oo degdeg ah.
Laga soo bilaabo Abriil 2020 ilaa Abriil 2021, waxaa jiray 75.673 dhimasho xad dhaaf ah oo opioid ah. Tani waxay ahayd koror weyn oo ka yimid 56.064 dhimashada xad-dhaafka ah ee opioid ee lagu arkay 12 bilood ee la soo dhaafay.
Akhri wax dheeraad ah medicalnewstoday.com (Source, EN)
CBDdaawocudurka opioidsxad dhaafMaraykankaqabatinka
Daadcigii 5-aad ee shirkii cilmi-nafsiga ee Yurub oo ka furmay...
Cilmi-baaris cusub oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya isticmaalka xashiishadda iyo hawlaha garashada
Iskaashiga Yurub ee cilmi-nafsiga ee daryeelka caafimaadka
Piet wuxuu rabaa inuu beero haramaha. Sababtoo ah la'aanteed...